Sidee si ay u gudbiyaan Movies ka iPad in Lugood Si fudud
> Resource > iPad > Movies beddelashada ka iPad in Lugood noqon karaa Sidaas Easy
Ma waxaad doonaysaa hab lagu filimada ka iPad wareejiyo Lugood? Videos aad qabtay iPad si toos ah lagala soo bixi in iPad la Internet aan la synced karaa in Lugood. Lugood kaliya kuu ogolaanaysaa inaad filimada ka Lugood wareejiyo iPad, jidkii dib uma celin. Xaaladdan oo kale, hadii aad u baahan tahay in filimada laga iPad wareejiyo Lugood oo bilaash ah ilaa meel, waa inaad isku daydaa TunesGo Wondershare . Waa Lugood Saaxiibkiis ugu fiican in aad nuqulka filimada ka iPad in Lugood. Hadda waxa ay taageertaa Lugood ugu dambeeyey 11. Kaliya 2 talaabooyinka, waxaadna ku gaari doonaa goolka.
Isku day TunesGo Wondershare hadda! Waa shuqullo wanaagsan u leh Windows 8, Windows 7, Windows XP, iyo Windows Vista kombiyuutarada ku salaysan.
Tallaabada 1. Run MobileGo iyo xirmaan iPad la PC
Ka dib markii ay soo degsado barnaamijkan on your PC, waad ku rakibi kartaa. Double guji icon "Wondershare TunesGo" on desktop PC. Markaas, xiriiriyaan iPad la PC via cable USB ah. MobileGo waxaa lagu ogaan doonaa si toos ah ilaa iyo inta uu ku xiran.
Fiiro gaar ah: Fadlan soo dajiyo Lugood ka hor inta aadan isku dayi TunesGo. App Tani kaliya ka shaqeeya halka Lugood la geliyo.
Tallaabada 2. dhoofinta filimada ka iPad in Lugood
Hadda, riix batoonka "Media" ee ay leeg- bidix. Markaad u timaadaan inaad suuqa kala warbaahinta, waxaad arki doontaa jiro line ugu sareysa. Guji "Movies", button labaad, inay soo qaadaan suuqa kala maamulka filimada ee. Markaas dooran filimada aad doonayay, oo guji saddexagalka yar hoos badhanka "Dhoofinta in". Liiska jiido hoos A muuqataa. Dooro "Dhoofinta in Lugood Library". Markaas barnaamijka bilaabi doonaan si ay u gudbiyaan filimada. Intii lagu guda jiray filimada ku wareejinta, inaad si fiican u sii lahaa aad iPad ku xiran ilaa aad dhamaysato ku wareejinta.
TunesGo si buuxda u la jaan qaada oo dhan iPads: iPad mini, iPad la isha Display, iPad cusub, iPad 2 iyo iPad. Ka dib markii wareejinta, waxaad ka heli kartaa in aad filimada ayaa ka soo dhaqaaqay iPad in Lugood. Hadda, uma baahnid inaad wax laga walwalo tirka filimada ku saabsan iPad. Dhab ahaantii, ka sokow filimada ka iPad gudbaayo Lugood, xitaa iyaga nuqul karaa in PC, iyo qeybsanaan.